देशलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्नु नै सबैको कर्तव्य हाे : नेकपा नेता थापा - Muldhar Post
देशलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्नु नै सबैको कर्तव्य हाे : नेकपा नेता थापा
देशलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्नु नै सबैको कर्तव्य हाे, पार्टी भित्र पाखुरी सुर्कासुर्कि अलि समयलिएर उपयुक्त समयमा गर्दा हुदैन र कमरेडहरु ? लेख्दै नेकपा नेता तथा शुदुरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापाले आफ्नाे टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अहिले बिश्व सँगै देश स‌कट परेकाे बेला देशलाइ केन्द्र भागमा राखेर सबै मिलेर अगाडि बढनु पर्ने वताएका छन् । कोरोनाले ल्याउन सक्ने आर्थिक संकट कल्पना भन्दा भयावह अबस्था छ कसरी देशलाइ स‌कट बाट बचाउने भन्ने सबै लाग्नु पर्ने थापाकाे टिप्पणी रहेकाे छ ।
ओलीनिकट मानिने नेकपा नेता कर्णबहादुर थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्-“गत शनिवार बसेको सचिवालय वैठकमा भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नु भयो । आफूमा रहेका कमिकमजोरीको बारेमा सबैले आत्मालोचना गरियो । पार्टीलाई एकतावद्ध ढंगले अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालियो । सरकारलाई पार्टीको वलियो साथ रहनेछ । क.बामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधीसभामा ल्याईनेछ । सचिवालयको एकताको प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजानका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिव क विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी क.झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया सबैले सुने, पार्टी एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने भयो । जनता र कार्यकर्ताका कुरा सुन्यौ । अब पाँच क.केपी शर्माओली सरकारले काम गर्छ । हामी राजीनामा माग्दैनौ । यी सन्देशले जनता र कार्यकर्ता पंत्तिमा ठूलो उत्साह छायो । त्यसकोभोली पल्ट विभिन्न ठाऊँमा गुटका भेला गरिएका समाचार आए । सचिवालयको निर्णय मान्दैनौ । सबै निर्णय स्थायी कमिटीले गर्नु पर्दछ।
वैठकको माग गर्ने २० जनाको एकैमत लिएर वैठकमा जानुपर्दछ भनी दस्तावेज लेख्ने जिम्मेवारी पनि केही व्यक्तिले पाएछन् । २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको छुटै भेला पनि भएछ। । धेरै स्थायी कमिटीका सदस्यले गुट भेला गरेर पहिल्यै निष्कर्ष निकालेर वैठकमा जाँने सोच पार्टीको हित र विधान विपरित छ, यसो गर्नु हुदैन भन्ने मत राखे्पछि केही व्यक्तिहरुको पार्टीभित्र विवाद गराइरहने उद्धेश्य असफल भयो । २४ गतेको सचिवालय बैठकपछि दुई अध्यक्षको सहमतिमा स्थायी कमिटीको वैठकको मिति सारिएको छ ।
काम कुरो एकातिर कुम्लो वोकी ठिमीतिर भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी नेताहरुले काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम जनता र कार्यकार्ताको भावना छ । संसद वोलाइएको छ । बजेट ल्याउने बेला नजिकै आईसक्यो । कोरोनाले ल्याउन सक्ने आर्थिक संकट कल्पना भन्दा भयावह छ । देशलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्नु नै सबैको कर्तव्य होइन र ? पार्टी भित्र पाखुरी सुर्कासुर्कि अलि समयलिएर उपयुक्त समयमा गर्दा हुदैन र कमरेडहरु”?